Serivisy fanaovana casting Precision Die ho an'ny indostria roa ambin'ny folo - Casting Minghe
Amin'ny maha mpanamboatra mari-pahaizana TS 16949 azy, i Minghe dia nandray anjara tamin'ny sehatry ny milina sy ny famonoana ireo singa mandeha amin'ny fiara. Ny mpiasa matihanina momba ny mpiasa dia afaka manome anao amin'ny alàlan'ny teny nindramina ho an'ny singa marina ilainao ho an'ny Sina na eny ampitan-dranomasina aza mamorona fiara.
Mahafantatra ireo mpanamboatra mekanika fa ny Minghe Casting dia mamely marika foana rehefa mamokatra ampahany betsaka azo atokisana, ara-potoana ary lafo vidy. Ny fahaizantsika mandatsaka maty dia ahitana singa mekanika izay atolotra am-pitokisana ireo fepetra voafaritra takin'ny indostria.
Miakatra amin'ny fanamby izahay amin'ny famolavolana singa matevina avo lenta natao ho an'ny fiara manidina maoderina, ary mitazona hatrany ny fenitra henjana amin'ny fandefasana ara-potoana sy ny kalitao azo antoka izay notazoninay nandritra ny antsasaky ny taonjato.
Ny matihanina Telecom sy ny matihanina amin'ny fifandraisan-davitra dia afaka matoky an'i Minghe Casting hanatitra am-pahatokisana ny anjarany ara-potoana. Ny ekipanay manampahaizana manokana momba ny milina sy ny casting dia mahafantatra ny fandeferana mitaky fahombiazana sy ny fahombiazana takiana amin'ny indostrian'ny fifandraisan-davitra. Ny rafitra kalitao ISO 9001: 2015 dia mahatonga ny MINGHE hifanaraka tanteraka amin'ireo andrasan'ny indostrialy TELECOM. Mifandraisa aminay mba hahitanao ny fomba ahafahanay mampiasa ny tetik'asa TELECOM manaraka sy ny tobin'ny tobim-pahefana.
Ho an'ny faritra famokarana paompy sy vokatra famokarana famokarana betsaka, MINGHE CASTING dia manome ny mari-pahaizana avo indrindra amin'ny milina & fanodinana asa miaraka amin'ny fototr'asan'ny traikefa 30+ taona nanompoana ny indostrian'ny paompy. Ny fahatokisanay paompy-valizy sy ny manam-pahaizana dia manome fahatokisana. Tonga lafatra ny zava-kanto amin'ny famokarana volavola singa lehibe miaraka amin'ny fahamendrehana JIT tanteraka, tohanan'ny kalitao sy ny fahatokisana maharitra andrasan'ny mpanjifanay.
Atambaro izany rehetra izany amin'ny alàlan'ny fisafidianana ireo fitaovana avo lenta ho an'ny maty ary ny fiheveran'ny ekipan'ny manam-pahaizana momba ny famokarana sy ny injeniera, ary manana ny indostrian'ny fanariana mitovy amin'ny fiasa milentika hafanana ianao. Heat Sink Die Casting avy amin'i Minghe Casting dia natao hihaona amin'ny fenitra mangatsiaka indrindra amin'ny Cooler. To Minghe dia tsy famaritana fotsiny izany; iraka tanterahantsika miaraka amin'ireo singa.
Cabint Display amin'ny LED
Isaky ny tetik'asa, dia manana vahaolana namboarina izahay, miaraka amin'ireo mpamorona, mpanolo-tsaina hanamboatra fefy LED mampiseho famoronana ho an'ny tontolo manokana. Ny ekipanay R&D, miaraka amin'ny traikefa nananany nandritra ny 35 taona, dia manampy anao hamorona traikefa tsy manam-paharoa sy tsy hay hadinoina
Ny anarana Minghe dia teny fanalahidy amin'ny famokarana fitsaboana. Misaotra ny lazantsika matoky fa mahafeno fepetra takiana miavaka amin'ny singa be pitsiny sy be pitsiny, izahay dia manome ny fahamendrehana amin'ny famatsiana izay tsy azon'ny mpanjifa mpitsabo miaina raha tsy misy.
Ny fanariana ny maty dia dingana fanariana vy, izay miavaka amin'ny alàlan'ny faneriterena avo amin'ny vy anidina amin'ny alàlan'ny lavaka famolavolana. Ity dingana ity dia somary mitovy amin'ny famolavolana tsindrona. Ny ankamaroan'ny fanariana maty dia tsy misy vy, toy ny zinc, varahina, aliminioma, manezioma, firaka, ary ny alloys-ny.